पाटी सुढृदीकरणका लागी मेरो उम्मेदवारी हो : विश्वकर्मा « Tulsipur Khabar
तुलसीपुर, २ मंसीर । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेसन यहि मंसीर २४ गतेदेखी काठमाण्डौमा हुन लागेको छ । पाटीको महाधिवेशन अन्र्तगत अहिले वडा र पालिका स्तरको अधिवेशन सम्म गरी क्षेत्रिय,जिल्ला र प्रदेशको अधिवेशन गर्ने तयारी भईरहेको छ । सोहि अनुरुप पाटीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु नेतृत्वका लागी दौडधुप गरेका छन भने आकांक्षी पदमा आफनो उम्मेदवारीको घोषणा गदै प्रचारप्रसारमा समेत लागेका छन् ।यसै क्रममा पाटीको केन्द्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागी दाङबाट दलित आरक्षण कोटाबाट जोगेन्द्र बहादुर सुनार(जोगेन्द्र विश्वकर्मा)ले पनि उम्मेदवारीको घोषणा गर्नुभएको छ ।
यस अघि पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिमा छनोट भई केन्द्रिय सदस्यमा पराजय व्यहोर्नु भएका उहाले यस पटक पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि हुदै केन्द्रिय सदस्य बन्ने लक्ष्यका साथ चुनावी प्रचारप्रचारमा लाग्नु भएको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिका उम्मेदवार विश्वकर्मा संग सहसम्पादक लक्ष्मण विश्वकर्माले कुराकानी गर्नुभएको छ । -सम्पादक
१.स्वागत छ ?
धन्यावाद छ ।
२.तपाईको उम्मेदवारी किन ?
धन्यावाद लक्ष्मण जी । प्रश्नको लागी । हाम्रो पाटी नेपाली कांग्रेसको अहिले १४ औँ महाधिवेशन हुन गईरहेको छ । यसमा मैले पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागी दाङबाट दलित आरक्षणकोटाबाट चुनाव लड्ने योजना बनाएको छु । यसमा मेरो उम्मेदवारी खासगरी नेपाली कांग्रेसमा दलित समुदायहरुको सहभागिता बढाउन र पाटी शुद्धिकरण गर्नका निम्ति हो । म २०४६ साल देखी आफुलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई अगाडी बढाउदै जादा कांग्रेसको कार्यकर्ता हुदै निरन्तर रुपमा लागी रहेको छु । तर मैले आज सम्म पाटीमा लागी रहदा कहिल्यै पनि पदलोभी भएन । म ईमानदार कार्यकर्ताको रुपमा लागेकै कारण अहिले सम्म धेरै अवसरबाट बन्चित हुनु परेको हुदा यस पटक उम्मेदवारका रुपमा अघि सरेको छु । साथै पाटीका नेता कार्यकर्ताहरु संग समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्नका लागी पनि मेरो उम्मेदवारी हो । त्यति मात्रै होईन , मेरो उम्मेदवारीले गर्दा समग्र दलित समुदायको सहभागिताले कांग्रसमय हुदैछ भन्ने सन्देश पनि हो ।
म कांग्रेसमा महाधिवेशन प्रतिनिधिमा भाग लिदै गर्दा यसमा आम दलित समुदायहरुको साथ छ र भोलिका दिनमा स्थानिय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा पनि उत्तिकै ठुलो भुमिका रहनेछ भन्ने बारेमा मैले विश्वस्त गराउन चाहान्छु । म जोगेन्द्र बहादुर सुनार अर्थात जोगन्द्र विश्वकर्मा महाधिवेशा प्रतिनिधिमा आउनु उ एक्लै होईन समग्र दलित समुदायहरु छन् भन्ने कुरा पाटीको नेतृत्व गर्ने नेताहरुले बुझन जरुरी छ । त्यसकारणले पनि समग्र दलित समुदायहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी मेरो उम्मेदवारी रहेको छ ।
३. प्रचार प्रसारलाई कत्तिको तिव्रता दिनुभएको छ ?
निर्वाचनको मिति नजिकैदै गर्दा मैले चुनावी प्रचार प्रसारलाई तिव्र पारेको छ । तत्कालिन दाङ निर्वाचन क्षेत्र ४ र ५ लाई मर्ज गरेर हाल निर्वाचन क्षेत्र नम्वर ३ बनेको छ । म अहिले निर्वाचन क्षेत्र नम्वर ३ को क र ख का विभिन्न स्थानमा पुगेर नेता तथा कार्यकर्ताहरु संगको भेटघाटलाई तिव्र बनाएको छु ।उहाहरुसंग भेटघाट गदै मैले मलाई दलित आरक्षण कोटाबाट नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचन गराउन अपिल गरेको छु ।अहिले सम्म म पश्चिम दाङको गंगटे, हापुरे, शान्तिनगर, दंगीशरण ,तुलसीपुर ४,५,६,७,१०,११,१३,१४ र १५ लगाएतका क्षेत्रमा पुगेर मतदाताहरु संग भोट मागी सकेको छु । सवै संग भेटघाट गर्न नसकेपनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा भोट माग्ने कामलाई जारी राखेको छु ।
४. मतदाताहरुबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ ?
मतदाताहरुबाट मैले राम्रै प्रतिक्रिया पाएको छु । तत्कालिन दाङ निर्वाचन क्षेत्र ४ र ५ का नेता तथा कार्यकर्ताहरु संग विगत देखी नै राम्रो संग परिचित छु । हाल निर्वाचन क्षेत्र नम्वर ३ बनेको छ । यसमा पनि जति संग अहिले सम्म भेटघाट गरेको छु । सवैबाट मैले राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छु । विशेषगरी म प्रति साविक ५ नम्वर क्षेत्रका मेरा सहकर्मी साथीहरु धेरै उत्साहित हुनु भएको छ । किन कीपाटी प्रति मेरो लगनशिलता, ईमानदारिता र संघर्ष देखेर उहाहरुले धेरै प्रसंशा गर्नुभएको छ ।
५. महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित पछि यहाको अन्य कुनै पदमा भुमिका रहन्छ ?
अहिले म महाधिवेशन प्रतिनिधिमा चुनाव लड्दैछु । र महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भए भने म दलित आरक्षण कोटाबाट पाटीको केन्द्रिय सदस्य बन्ने मेरो चाहाना हो । किनकी १३ औँ महाधिवेशनमा पनि दाङ महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएपनि केन्द्रिय सदस्यमा म त्यतिबेला पराजित हुन पुगेको थिए । यस पटक १४ औँ महाधिवेशनमा फेरी केन्द्रिय सदस्यका रुपमा आफुलाई अघि सार्ने जमर्को गरेको छु । आशा गरौ यसमा सवैको साथ मिल्नेछ ।
६..तपाई लामो समय देखी राजनितिकमा लाग्नु भएको छ ? हाल सम्म पाटीको कुन कुन जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्नुभयो ।
म २०४६ साल देखी नेपाली कांग्रेसमा लागे । मेरो अग्रज नेता स्वर्गिय खुम बहादुर खड्काले मलाई यो पाटीमा प्रवेश गराउनु भएको हो । र उहाकै साथ र सहयोगले गर्दा अहिले पनि म पाटीमा निरन्तर संघर्ष गदै यहा सम्म आईपुगेको छु । मैले नेपाली काग्रेसको तत्कालिन हलवार गाउाँ ईकाई सभापति भएर दुई कार्यकाल पुरा गरेको छु । त्यो भन्दा अघि २०४९ सालतिर पाटीको क्षेत्रिय सदस्य भएर काम गरेको थिए । पाटीको १२ औँ महाधिवेशनमा महासमिति सदस्य भए, १३ औँ महाधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधि सदस्य भए र अहिले पनि छु । यस्तै पाटीको जिल्ला समिति सदस्य पनि भएर काम गरेको छु भने पाटीको भातृ संगठन नेपाल दलित संघको केन्द्रिय सदस्य, पाटीको सिफरिसमा २०५६ सालमा सुकुमबासी समस्या सामाधान आयोगको सदस्य भएर काम गरेको छु ।
७. यति लामो समय देखी राजनितिमा लाग्नु भएको छ ? तपाई खुल्ला बाट आउनु पर्ने हो ? तर दलित आरक्षण कोटामै चुनाव लड्ने अवस्था कसरी बन्यो ?
तपाईले भनेको कुरा ठिकै हो । तर हरेक राजनितिक दलमा पछिल्नो समय गुटउपगुटको हावी हुन थालेको छ । यो समस्या नेपाली कांग्रेसमा पनि देखीएको छ । जसुले गर्दा एक अर्काको विरोध गर्ने र समाप्त पार्ने खालका गतिविधिले गर्दा चुनाव लड्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।अर्को कुरा म जोगेन्द्र बहादुर सुनार विगत लामो समय देखी राजनितिक क्षेत्रमा क्रियाशिल हुदै आएको व्यक्ति हुँ । म खुल्लाबाट पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि लड्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति हुँ । तर मेरा अग्रज तथा नेतृत्वकर्ताहरुले मलाई दलित आरक्षण कोटाबाटै अगाडी सारेको हुदा म आरक्षणबाट अघि बढ्न बाध्य भएको छु ।
किन भन्दा हिजोको दिनमा दलित समुदायहरुलाई राजनितिक , आर्थिक र सामाजिक शशक्तिकरण गर्नका लागी आरक्षणको कोटा हुनु पर्छ भनेर आन्दोलन गर्ने, माग गर्ने मध्ये एक म पनि भएकाले उहाहरुले तपाईले मागेको अधिकार भएको हुदा तपाई आरक्षणबाटै अघि बढ्न सुझाव दिएकाले मैले स्वीकार गरेको छु । तर आरक्षण कोटाबाट पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनु खुल्ला सरह हो कुनै फरक छैन ।
८.अन्तमा केहि भन्नुछ ?
सवप्रथम म तपाई र तपाईको मिडिया परिवारलाई विशेष धन्यावाद दिन चाहान्छु । म जोगेन्द्र बहादुर सुनार । मलाई जोगेन्द्र विश्वकर्मा भनेर चिन्ने गरेता पनि मेरो नागरिकतामा जोगेन्द्र बहादुर सुनार भएकाले म सम्पुर्ण मतदाताहरुलाई नझुक्किन अपिल गर्न चाहान्छु । म दलित आरक्षण कोटाबाट अहिले महाधिवेशन प्रतिनिधि सदस्यमा उठेको हुदा मलाई अमुल्य मत दिनका लागी सम्पुर्ण मतदाताहरु समक्ष फेरी पनि अपिल गर्न चाहान्छु । दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्वर ३ अन्र्तगत पालिकाको वडा , पालिका र क्षेत्रिय प्रतिनिधिहरुले मलाई आफनो अमुल्य मत दिएर जिताउनुहुनेछ भन्ने पुर्ण आशा पनि लिएको छु ।
म एउटा ईमानदार र संघर्षशिल कार्यकर्ता भएको हुदा म निर्वाचित भईसकेपछि पाटीका सवै नेतृत्वकर्ता तथा कार्यकर्ताहरु संग समन्वय र सहकार्य गर्ने म संग क्षमता छ । पाटीलाई थप बलियो र मजबुद बनाउनका लागी म संग योजना र क्षमता छ ।यति मात्रै होईन म समग्र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गदै आगामी दिनमा थप दलित समुदायको सहभागिता बनाउने मेरो लक्ष्य छ ।त्यसकारण मलाई चिन्ने तथा परिचित हुन बाँकी रहनु भएका नेता कार्यकर्ता सवै संग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा मैले भोट मागेको छु । अबश्य पनि मलाई अमुल्य मत दिनुहुनेछ भन्ने म विश्वस्त छु ।